Iindaba zesiXhosa, 20 eyoKwindla 2019 – Zibonele FM | 98.2
Iindaba zesiXhosa, 20 eyoKwindla 2019
Written by Ashia Nkontsa on 20/03/2019
Ikhululwe indoda ibithyolwa ngokubulala umfazi wayo
Ikhululekile indoda yaseMitchell’s Plain ebijamelene nezityholo zokugqithis’amafu unyana wayo olikhoboka leziyobisi. Umnumzana Sedick Abrahams oneminyaka engamashumi amathandathu anesithathu ubudala, ukhululwe yinkundla kamantyi yaseMitchell’s Plain izolo emva kokubanjelwa ukuhlaba abulale uClinton Abrahams obeneminyaka engamashumi amabini anesibhozo ubudala ngethuba loxambuliswano apho unyana wakhe wayemgrogrisa ngesinkempe kwinyanga yoMqungu kunyaka ophelileyo. Emva kojijiswano ngemela u-Sedick uphethe emosela unyana wakhe kambe kungokunje ukhwele kumaqonga onxibelelwano ebamba ngazibini kubahlali ngenkxaso yabo nangokungamgwebi ngokugqithis’amafu unyana wakhe. Uthi uyamkhumbula umntu eyayinguye le dyongwana phambi kokubanjwa ngesixhanti yi-Tik.
Livuka ngeendaba ezimbi usapho lakwaMthembu
Uvuke ngendaba ezimbi zokusweleka kwentombi yakhe umbhexeshi oyintloko epalamente kumbutho we ANC umnumzana Jacson Mthembu. Ingxelo zidiza ukuba uKhwezi Mthembu ubeneminyaka engamashumi amabini anesihlanu ubudala uzibulele kwikhaya labo kwindawo ehlala amalungu epalamente iPelican Park eKapa kubusuku esivuka kubo. Umnumzana Jackson Mthembu uthi belusapho baphatheke kakubi sesisehlo kwaye abanalwazi ukuba yintoni ekhokelele intombi yakhe kwesi sigqibo. Ukanti akukudala loka Mthembu ebekhala ngonyana wakhe omdala obexhaphaza iziyobisi.
Ababandakanyeka kwizenzo gwenxa kwezezimali azaseSteinhof
Bazakudibana nenyok’iphung’umhluzi onongiweyo abo babandakanyeka kwizenzo gwenxa zezimali kwinkampani i-Steinhoff. Usihlalo webhodi yale nkampani uHeather Sonn uthi lukunjelwe ngoku uphando ngoko ke bonke abafumaniseke bebandakanyeka bazakubhinqiswa nelahle. Le nkampani igunyaziswe ziikomiti ezine zepalamente ukuba ithi paha amagama abo babesakuthi ngcu kwizikhundla eziphezulu kuquka nohlazekileyo owayefudula eligosa eliyintloko umnumzana Markus Jooste kwakunye namanye amadoda amane angaphandle kweSteinhoff abandakanywe yinkampani yophicotho zincwadi i-PwC kule mbhondandumunye yokwehliswa ngemilenze kwemali.
Amapolisa ayasokola ukulwa nobundlobongela phantsi kodanya cimi wombane
Ucimi cimi owenzekayo wombane kweli lizwe lomzantsi Afrika uphazamisana ukusebenza kwamapolisa. Oku kudizwe ngamaqela awohlukeneyo ancedisana nokulwa ulwaphulo mthetho ekuhlaleni. Inqwanqwa lamapolisa okuhlala eLentegeur lithi liqaphele ukuba xa kuthe kwamka umbane liyanyuka inani lodubulo oluvakalayo kulangingqi. Ngabantu ababini abathe badutyulwa ngobusuku bangecawe kwiziganeko ezibini ezahlukileyo ngethuba kucime umbane ukatni kubusuku bangomvulo kudutyulwe konzakala abantu abathathu kwakula ngingqi. Usihlalo welinqwanqwa umnumzana Byron De Villiers uthi xa kucime umbane kuqhuma irhuluwa. Uthi bebesoloko benoloyiko kakade kodwa ngoku kuthe chatha kuba abasayazi nokuba isengumlo wamaqela emigewu okanye ngonqevu abathatha ithuba kuba kumnyama kusini na. Loka De Villiers uthi locimi cimi ubeka uxinizelelo nakumapolisa ebehleli engonelanga nangezixhobo kunzima ukukhangela abanqevu ebumnyameni.
Akukuhlanga eNyanga izinga lobundlobongela luphezulu nguloCimi Cimi
Ukanti usihlalo welase Nyanga inqwanqwa umnumzana Martin Makasi uthi ukushokoxeka kwezibane zasesitalatweni bekusoloko kuyingxaki kodwa ngoku kuthi chatha ngenxa yalo cimi cimi. Uthi kwiveki ephelileyo bathumele imbalelwano kwilungu lekomiti kasodolophu kwicandelo lezamandla nombane ukuba andwendwele lalokishi ebusuku ukuze abe nokuyiqonda kakuhle indlela abaphila ngayo.